NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 2
Talata –Vohimena: dahalo iray maty, tafaverina ny Kalach iray
Par Taratra sur 15/10/2019 Faits Divers, NS Malagasy
Lavon’ny zandary nandritra ny fifandonana nataon’izy ireo niaraka amin’ny andrimasom-pokonolona antsoina hoe “Zazamainty”, ny harivan’ny alahady teo tao Talata-Vohimena, distrikan’i Manadriana, Fianarantsoa, ny dahalo iray. Tratra tamin’izany ny basy mahery vaika Kalachnikov iray ary tafaverina avokoa ireo omby 35 nangalarin’ireo dahalo. Efa niandry teo amin’ny kizo ao Ambatolahindravahy ireo andrimasom-pokonolona nandritra ny fanafihana ka nahafahana […]
Cemgam: ahafahana mampiakatra ny lentan’ny Tafika ny fanazarantena
Nanome baiko hentitra ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika malagasy (Cemgam), ny Jly Rakotonirina Théophile, fa averina ny fiofanana isan-tsokajiny eo anivon’ny Tafika, toy ny fiofanana mpilatsaka an’elonaina. “Tsy misy afa-tsy ny fanazarantena irery ihany no ahafahana mampiakatra haavo lentan’ny Tafika malagasy. Sahia mandrefy sy manatsara ny zava-bita mba ho tamberin’andraikitra ho an’ny Tafika malagasy, nandritra […]
Ikalamavony: lavon’ny zandary ny dahalo roa, azo sambo-belona ny telo
Maty voatifitry ny zandary ny dahalo roa nandritra ny fifandonan’izy ireo tao Ikalamavony. Azo sambo-belona kosa ny namany miisa telo. Nifandona mafy indray ny dahalo sy ny mpitandro filaminana, ny marain’ny asabotsy teo tao Maroavaratra, fokontanin’Andrainafototra, kaominina Ambalankindresy, distrikan’Ikalamavony. Lavo, nandritra izany, ny dahalo miisa roa raha azo sambo-belona kosa ny telo amin’ireo andian-jiolahy nampihorohoro […]
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Na samy manana ny hamehana aza, misy tanjona iombonana
Par Les Nouvelles sur 15/10/2019 Elucubrations, NS Malagasy
Tsy mbola nandoro toy ny tamin’iny volana jolay iny ny hafanan’ny masoandro tany amin’ny ila-bolatany avaratra. Nahery setra mihoatra noho izay nahazatra ny fifofofofon’ny rivotra. Po toy izay dia miteraka tondra-drano tsy mbola fahita ny fivatravatran’ny filatsaky ny orana… Niova haingana araka izay ny toe-tsain’ny mponina any amin’ireo firenena mandroso. Na eo aza ireo minia […]
Par Taratra sur 15/10/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Fahafahana, fahalalahana… Niverimberina indray ireo teny roa ireo, omaly 14 oktobra, nahatsiarovana ny faha-61 taona nanambarana fa Repoblika i Madagasikara. Zava-dehibe io daty io, hoy ny rehetra, saingy manao ahoana ny fiantraikany amin’ny fiainam-piarahamonina malagasy ankehitriny? Tsy azo odian-tsy hita ny fivoarana iainan’ny isam-batan’olona eo amin’izay fahafahana sy fahalalahana izay, indrindra amin’ny fanehoan-kevitra. Maro, rahateo, […]
Par Taratra sur 15/10/2019 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Mifonja avy hatrany ireo zandary minia mandika lalàna mandritra ny asany. Hentitra amin’ny fanajana ny lalàna ireo tompon’andraikitra, ary mbola nanamafy izany, omaly. Efa maromaro ireo zandary any am-ponja, vokatr’izany. “Hanaovana fanadihadiana ary handraisana fepetra ireo zandary minia tsy manara-dalàna sy tsy manaja ny zon’olombelona ary manao fihetsika mamoafady”, hoy ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, kaomandin’ny […]
Fahasalamana: mahafaty haingana ny aretina haromotana
Par Taratra sur 14/10/2019 Faits Divers, NS Malagasy
« Mitsahatra hatreo ny haromonana ». Izany ny lohahevitra nentina nanamarihana ny Andro eran-tany iadiana amin’ny aretina haromotana, tany Antsirabe ny faran’ny herinandro teo. Toerana ahitana trangana haromotana matetika isan-taona ny ao Antsirabe. Ny taona 2017, nahatratra 17 ireo olona matin’io aretina io tany an-toerana. Noho ny ezaka sy ny fanentanana anefa, efa nidina izany taha izany. […]
Nahafahana nanome sehatra ireo tovovavy hilaza ny heviny ny « TEDxYouth » natao teny Andrainarivo ny zoma teo, nokarakarain’ny Unicef sy ny UNFPA. Tafiditra tao anatin’ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy ny hetsika. 10 mirahavavy izy ireo no naneho hevitra malalaka, nizara ny fiainany sy nampahafantatra ny olana sedrainy eny anivon’ny fiarahamonina ka mahatonga sakana […]
Nodimandry, ny asabotsy hariva teo amin’ny faha 77 taony, ny mpitandrina Ramino Paul Abraham. Nitandrina tao amin’ny FJKM Amparibe Famonjena nandritra ny 21 taona izy. Lohandoham-pisorona tamin’ny fitondrana skoto ary nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin’izany fitaizana tanora izany ny tenany. Nitazona ny andraikitra maha sekretera jeneralin’ny FJKM ihany koa ny mpitandrina Ramino Paul […]
Par Taratra sur 14/10/2019 Divers, NS Malagasy
Mivory miaraka indroa isan-taona ny Banky iraisam-pirenena (BM) sy ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI). Natao ny volana avrily 2019 teo ny “fivoriana lohataona” (printemps) ary amin’ny 14 hatramin’ny 20 oktobra ho avy izao ny fivoriana fararano (automne). Samy any Washigtown Etazonia avokoa ny anaovana roa ireo, manan-danja tokoa, amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny roa tonta, mikasika ny […]
Par Taratra sur 14/10/2019 NS Malagasy, Reflets
Sambany eto amintsika: nambabo tanora maro i Dadju
Par Taratra sur 14/10/2019 NS Malagasy, NS-Culture
Niavaka amin’ireo hetsika zavakanton’iny faran’ny herinandro iny koa ny tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, ny zoma hariva teo. Voalohany, mpanakanto fanta-daza eran-tany no niaka-tsehatra tao, tsy iza fa i Dadju. Manaraka izany, sambany nivahiny eto amintsika ity mpihira ity ary seho tokana ity natolony ity. Voaporofo fa maro ny Malagasy, […]
Na tsy teo aza i Fafah: nankasitrahin’ny mpankafy ny natosaky ry Mahaleo
Ho avy, avy eo, tsy hiaka-tsehatra indray i Fafah. Izay ny zava-nisy talohan’ny seho, notanterahina tetsy Antsahamanitra. Nandrasan’ny maro ny mety ho fiantraikan’izany, saingy raha ny hita sy tsapa, omaly, afa-po ireo mpankafy marobe. “Fihavanana tsy ravan’ny taona” ny eo amin’ny tarika Mahaleo sy ny mpankafy azy, na eo aza ny fiovana goavana lalovan’ny tarika. […]
Judo – «Mondiaux veterans»: resy am-boalohany Razafy Luc
Par Taratra sur 14/10/2019 NS Malagasy, NS-Sports
Ratsy ny vokatra azon-dRasoanaivo Razafy Luc, hany solontena malagasy niatrika ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, taranja judo, sokajy “veteran”. Fihaonana, notanterahina tany Marrakech, Maraoka, nifarana, omaly alahady. Resy teo amin’ny fihodinana faharoa na ny famerenana “repechage” mantsy izy nandritra ny fihodinana faharoa, sokajin-danja latsaky ny 81 kg. Lavon’ilay Frantsay, i Lesdalon Laurent, tamin’ny alalan’ny “ippon”, […]
“Asief 2019” – Fanokafana: natomboka tamin’ny diabe
Nanombohana ny lanonam-panokafana ny fifaninanana nasionaly ny “Asief”, ny faran’ny herinandro teo aty Antsiranana, ny diabe nataon’ireo mpandray anjara rehetra. Niainga teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro, namakivaky ny tanàna ka niafara teny amin’ny kianja mitafo, toerana nanatanterahan’ireo manampahefana sy ny vahiny manan-kaja ny lahateny nifandimbiasana. Nohamafisin’ny filohan’ny Asief, i Jhone […]
« Rallye international de Madagascar »: norombahin’i Ando sy i Rivo ny fandresena
Nifarana, omaly tany Alaotra Mangoro, ny “Rallye international de Madagascar”, dingana fahenina farany, hiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny familiana fiarakodia. Norombahin’i Rivo sy i Ando, mpanamorin’ny klioba FMMSAM, ny fandresena, tamin’ity. Nanantombo teo amin’ny tanjaky ny fiara sy ny fahazaran-dalana izy mirahalahy. Hain’izy mirahalahy tsara ny nandrindra sy nikajy ny fotoana, tamin’ny fanatanterahana ireo […]
Fanomanan’ny Barea ny «Chan»: mahavelombolo ny endri-dalao nasehony
Amin’ity alatsinainy ity, hamoaka ny anaran’ireo mpilalao 23 mirahalahy handrafitra ny Barea de Madagascar, hiatrika ny lalao miverina, hikatrohana amin’ny Brave Warriors-n’i Namibia, i Rivo Francklin, mpanazatra. Lalao hiadian-toerana amin’ny “Chan 2020”, hatao any Kameronina, natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina. Mandra-piandry izany, niatrika lalao firahalahiana sady tsapa farany tamin’ny ekipa voafantin’Analamanga ny Barea de […]
Basikety – “World Beach Games”: hidona amin’i Brezila isika rahampitso
Hiditra amin’ny lalao fahatelo, rahampitso, ny ekipa malagasy, ao anatin’ny fifaninanana “World Beach Games”, sokajy vehivavy, basikety 3×3, tanterahina any Qatar. Hihaona amin’ny solontena malagasy, amin’ity lalao fahatelo fifanintsanana isam-bondrona ity, i Brezila. Tsi ahivina fa ao amin’ny vondrona C ny Malagasy, miaraka amin’i Mongolia sy i Pays-Bas ary i Brezila. Raha hiverenana ny lalao, […]
Par Taratra sur 14/10/2019 En Bref, NS Malagasy
Hihatsara amin’izay Andro vitsy lasa izay, tamin’ny fomba makotrokotroka ny nanaovana ny fanambarana tetsy Analakely fa hiova ho «Pro league» ny fifaninanam-pirenena, taranja baolina kitra. Samy resy lahatra ny rehetra fa hiova ary hihatsara amin’izay, manomboka izao, ny fifaninanam-pirenena. Tsy misy azo kianina fa tena mipetrapetraka tsara avokoa ny lamina ho amin’ny fanatanterahana izany, izay […]
Rugby – «Gold Top 20»: nomontsanin’ny FTM Manjakaray ny Tam Anosibe
Nitohy, ny asabotsy 12 sy omaly alahady 13 oktobra, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny andro fahatelo, ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby na ny “Gold Top 20”. Saika voahaja avokoa ny lojika, tamin’ireo vokatra. Anisan’ny nandrasan’ny rehetra ny donan’ny FTM Manjakaray sy ny Tam Anosibe. Tsy nahatosika ny Manjakaray anefa Anosibe […]
Rugby vehivavy – «Africa womens sevens»: laharana fahatelo ny Makis de Madagascar
Azo lazaina fa tsara ny vokatra azon’ny Makis de Madagascar, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby lalaovina olona fito, ho an’ny vehivavy. Nitana ny laharana fahatelo ny Malagasy, tamin’ity. Nifarana, omaly alahady, tao amin’ny kianja Monastir – Mustapha Ben Jannet Stadium, ny “Africa womens sevens” na ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, […]
Par Taratra sur 14/10/2019 Economie, NS Malagasy
Araka ny voafaritry ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE), hivoaka mialoha ny faran’ity volana oktobra ity ny rijan-teny mamaritra ny vidiny tokana ho an’ny bokin’omby, na Fib (Fiche individuelle des bovidés), izany hoe, ho sarany iray mitovy manerana an’i Madagasikara. Natao izany hiadiana amin’ny kolikoly amin’ny fomba maharitra, izay mianjady indrindra amin’ny tantsaha sy ny mpiompy […]
Tagnamaro – Toamasina: fambolen-kazo nafafy
10 tapitrisa! Ireo ny isan’ny zana-kazo kendrena hambolena aty amin’ny faritra Atsinanana. Anisan’ny hanatrarana izany ny tagnamaro, nandraisana anjaran’ny hery velona maro eto Toamasina, ny asabotsy 5 oktobra teo. Hafakely ny nanatanterahana azy satria fambolen- kazo tamin’ny alalan’ny famafazana voa na masomboly toy ny acacia, kesika, voatsokina, flamboyant, cacao, sns. Nandray anjara ny fikambanan’ny mpandrafitra […]
Toamasina : nesorina ireo sefom-pokontany 51
Nesorina ireo sefom-pokontany 51 amin’ireo 138 eto Toamasina. Saika ny lefiny no notendrena hitantana vonjimaika ny raharaha mandra-pisian’ny fifidianana. Nesorina ny sefom-pokontany 10 amin’ny 26 ao Morarano, ny 16 amin’ny 34 ao Tanambao V, ny 17 amin’ny 38 ao Ankirihiry, ny telo amin’ny 19 Ambodimanga, ary dimy amin’ny 21 ao Anjoma. Tsy mazava ho […]
Fivoriana ara-potoana: handinika indray ny tombontsoany ireo depiote
Par Taratra sur 14/10/2019 NS Malagasy, NS-Politique
Hanomboka rahampitso ny fivoriana ara-potoana Antenimierampirenena. Hanao ahoana? Handinika indray ny tombontsoany ireo depiote. Tsy mbola milamina. Araka ny loharanom-baovao, hiverina hikaton-trano handinika ny momba ireo tombontsoany ireo solombavambahoaka. Hivory ara-potoana izy ireo, amin’ny talata 15 oktobra izao, araka ny lalàna ka anisan’ny hiadiana hevitra ny momba izany. Eo ny momba ny mpanampy ny depiote […]
« Précédent 1 2 3 4 … 1 193 Suivant »